Ungayicinezela njani ifayile yePDF ngeAdobe | Martech Zone
Ungayicinezela njani ifayile yePDF ngeAdobe
NgoLwesithathu, Meyi 13, 2020 NgoLwesithathu, Meyi 13, 2020 Douglas Karr
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, bendisebenzisa into enkulu isixhobo somntu wesithathu sokucinezela iifayile zam zePDF ukuze isetyenziswe kwi-intanethi. Isantya sihlala siyinto ekwi-Intanethi, ke nokuba ndiyathumela nge-imeyile ifayile yePDF okanye ukuyibamba, ndifuna ukuqinisekisa ukuba icinezelwe.
Kutheni ucinezela iPDF?
Ukucinezelwa kungathatha ifayile ene-megabytes ezininzi kwaye uyihlise kumakhulu ambalwa eekilobytes, isenza ukuba kube lula ukukhasa ziinjini zokukhangela, zisenza ukuba sikhawuleze ukukhuphela, kwaye sikwenze kube lula ukuncamathisela nokukhuphela kwi-imeyile.
Ngamanye amaxesha abathengi bayandibuza ukuba zeziphi iisetingi ezizezona zilungele uxinzelelo lwePDF… kodwa ingabi yingcali kuxinzelelo kunye nokuthumela ngaphandle, andinalo nofifi lokuba ndiqale ngaphi. Ukuba ungumpro kwaye uyayiqonda iCCITT, Flate, JBIG2, JPEG, JPEG 2000, LZW, RLE, kunye ne-ZIP compression useto… Ndiqinisekile ukuba ungayifumana. Kukho itoni yamanqaku phaya.
Ndingathanda ukusebenzisa isixhobo soxinzelelo ukwenza umsebenzi kum. Ngombulelo, iAdobe ibonelela nje!
Ungayicinezela njani iPDF ngeAdobe Acrobat
Into endingakhange ndiyiqonde kukuba my Adobe Creative Cloud Ilayisenisi sele ifake isixhobo sokucinezela esakhiwe ngaphakathi kweAcrobat, iqonga leAdobe lokuhlela, ukuyila, nokudibanisa iiPDF. Ukuba ukhuphela iAcrobat, unokucinezela ngokulula iPDF yakho:
Vula iPDF kwi I-Acrobat DC.
Vula Nokwandisa i-PDF isixhobo sokucinezela uxwebhu lwePDF.
khetha Izixhobo> Lungiselela iPDF okanye ucofe isixhobo esikwiphaneli yesandla sasekunene.
khetha Ukunciphisa Ubungakanani beFayile kwimenyu ephezulu.
Cwangcisa ukuhambelana kweAcrobat uguqulelo kwaye ucofe KULUNGILE. Ukungagqibeki kuya kuba kuhlobo esele lukhona.
khetha UkuSebenza okuPhambili kwimenyu ephezulu yokwenza uhlaziyo kumfanekiso kunye noxinzelelo lwefonti. Cofa Kulungile xa ugqibile ukulungisa.
khetha Ifayile> Gcina njenge. Gcina igama elifanayo lefayile ukubhala ngaphezulu ifayile yangoku okanye unike igama elitsha kwifayile enobungakanani obuncinci bePDF. Khetha indawo kwaye ucofe ku Gcina.
Ungayicinezela njani iPDF ngeAdobe kwi-Intanethi
Ukuba unayo Adobe Creative Cloud ilayisensi, awunyanzelekanga nokuba ukhuphele iAdobe Acrobat ukuze ucinezele iiPDF zakho! I-Adobe inezixhobo ezikwi-intanethi onokuzisebenzisa!
Mane ulayishe iPDF kunye neAdobe ziya kuyicinezela kwaye ziyikhuphele. Kulungile kwaye kulula!
Cinezela iPDF ekwi-Intanethi
tags: I-acrobat dczodakaadobe acrobatilifu lokudala le-adobeiadobe kwi-intanethiI-CCITTCinezela pdfuseto lokucinezelwaIflethiJBIG2jpegJPEG 2000I-LZWpdfpdf ucinezeloRLE
Uphando olungcono, Iziphumo ezingcono: IQonga loPhando lweTech